Deezer wuxuu dib u naqshadeeyay Deezer-keeda App abuureyaasha, Qalabka Falanqaynta ee Muusikiistayaasha iyo Podcasters | Wararka IPhone
Sida Apple Music, waxay ka dhigtaa barxadda ay heli karaan dhammaan muusikiisteyaasha Apple Music for Artist. la socoshada baaxadda boodhadhka laga heli karo barxadda.
Codsigan, oo la bilaabay sanadkii hore, ayaa hadda helay casriyayn weyn, oo ah cusbooneysiin gabi ahaanba dib u habeyn ku sameyneysa is dhexgalka isla markaana sidoo kale ku kordhinaysa shaqo cusub kaararka kaararka si ay abuureyaashu u awoodaan la wadaag liistada liiska halka ay heesahaagu ku jiraan.
Kaadh kasta oo la wadaagi karo waxaa ku jira magaca liiska liiska ee farshaxanku ka muuqdo. Sida laga soo xigtay Deezer, farshaxanlayaashu kuma koobnaan doonaan liiska-soo-saarka la soo bandhigay, maxaa yeelay waxay sidoo kale heli doonaan "kaararka track" ee ay wadaagaan. Mar kasta oo waddo cusub la heli karo toddobada maalmood ee ugu horreeya ee la sii daayo, farshaxan-yaqaannadu waxay awoodi doonaan inay csi deg deg ula wadaag taageerayaasha, sidoo kale ku faafi khadadkaaga bulsheed
Barnaamijka Deezer ee Abuurayaasha ee iOS ayaa sidoo kale sii wadi doona bixinta astaamaha lasoco heesaha ama muujinta waxqabadka, kormeerka xogta socodka iyo waxqabadka maalin kasta, Toddobaadle iyo bille, iyo jaantusyo si fudud loo akhriyi karo oo loo kala jaray qayb ahaan, oo ay kujiraan madal, dalal, noocyo, iyo liisaska liiska ugu sarreeya.
Sida laga soo xigtay Fréderic Antelme, Madaxa Mawduuca ee Deezer:
Xogta badanaa wey badnaan kartaa oo wareeri kartaa. Barnaamijkeenan cusub ee 'Deezer for Abuuraha' ayaa ku wada jajabinaya qaab fudud oo loo akhriyi karo si uu kaaga caawiyo qorsheynta tallaabadaada xigta. Ama si loo hagaajiyo natiijooyinkaaga ama loo qorsheeyo bilowgaaga xiga ee weyn
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee uu helay codsiga Deezer, wuxuu ku daray taageerada Apple Watch si ay u awoodaan lasoco heeso aan horey usoo dagsanay iyo waliba la qabsiga HomePod iyo HomePod mini.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Deezer waxay dib u naqshadeyneysaa barnaamijkeeda Deezer ee Abuuraha, qalab falanqeyn loogu talagalay muusikiistayaasha iyo boodhadhka
ShazamKit wuxuu u oggolaanayaa horumariyeyaasha inay dhexgalaan Shazam barnaamijyadooda